Izwe lethu - esivulekile futhi benomoya wokungenisa izihambi - ngomumo ukwamukela izivakashi ezivela wonke amagumbi wonke wonke unyaka, futhi uzothola into akanayo ekhaya, futhi mhlawumbe kuphi emhlabeni. Izikhangibavakashi ezweni lonkana futhi Russia kuyogxilisa lezihambi onokuqonda kunazo futhi abanolwazi, ebembulela zonke izici ezintsha zezwe lethu elikhulu. A zwe lezizwe ezihlukene - okubizwa ngokuthi Russian phesheya, futhi ngeke sikwazi ukusho ukuthi akusiyo.
Kuphela ezweni lakithi kukhona ezihlukahlukene amathuba for a holiday emangalisayo - zokungcebeleka beach (Black, iCaspian kanye Azov coast), entabeni hambo (Urals, e-Altai, eCaucasus), balneotherapy futhi tebuciko (zaseCaucasia Mineral amanzi, iBaikal, Karelia). Labo abaphethe okungenani izinsuku ezimbalwa, nje ufuna buya lapha ngaphezu kwesikhathi esisodwa emuva eRussia. Izifiki, labo umnyanya lo holiday ezingavamile, njalo ukushiya izibuyekezo omuhle eRussia, kodwa njengabo bonke amaholide wachitha lapha. Ethandwa kakhulu kuba uhambo engxenyeni esempumalanga yezwe lethu, lapho ungakhululeka, ukuhlela snowmobile Safaris eqhweni, kanye nekugubha okujabulisayo engibaziyo izinkambo noma ukuzibandakanya bedoba iChibi iBaikal - yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni.
Amahhotela abaningi eRussia, lisendaweni, umeme izivakashi ukuchitha egumbini lakho ukhululekile iholidi imilingo, kodwa izivakashi ezivela phesheya bavamise kucasha ehhotela "iBaikal Business Centre". Kutholwe endaweni enhle kwabantu nasekusebenzelaneni nemvelo ehlanzekile ye-Irkutsk, leli hhotela inikeza izivakashi zayo 59 amakamelo lwezigaba ezahlukene, futhi ibhizinisi - a lounge Chic imihlangano yebhizinisi, izingxoxo, izingqungquthela kanye nezethulo. Njengoba umkhuba ubonisa, izingxoxo ibhizinisi, kwenziwe nemibandela ubuhle amazing kanye nendzawo lehlobile, bayaphumelela kakhulu futhi babe ukuqhubeka eside. Uma uza iChibi iBaikal azokuqhubela umndeni iholide ezivamile - kakhulu kufanele ngekhanda wamakhaza ubuhle kanye salon ubuhle, ejimini yesimanje kanye sauna, kanye nightlife in zokudlela, ikhofi izitolo kanye nemigoqo ukhululekile - konke okuhle ukuthi banganikeza amahhotela Russia.
Eminyakeni yamuva, izivakashi zakwamanye amazwe kukhona uhambo ethandwa kakhulu zaseCaucasia Mineral Amanzi - Wellness spa resort etholakala endaweni engajwayelekile phakathi kwezilwandle iCaspian kanye Black. Kukhona kokubili amahhotela ephezulu, ngesevisi izinga kanye nendawo yokuhlala ukhululekile, futhi kukhona ongaphakeme ongakhetha izindleko - izimpesheni amahhotela yangasese, ". Nozakwethu" okuyinto Nokho, izinga lenkonzo e neze kunabayeni ngaphezulu elite abahambi ongumpetha belulekwa ukuba banake ezinye zalezi amahhotela eRussia, ikakhulukazi, complex hotel "Beshtau" ukuba luthathe indawo enkulu nge umbono omangalisayo iningi esifundeni - feather ngokwesiko Russian utshani emaqeleni, Pines ngokubabazekayo namahlathi lezihlahla, ohlanzekile izimfunda kanye mrachno- ngomusa enhle of eCaucasus ezintabeni. Ihhotela 178 amakamelo, libanzi futhi ethokomele, ifakwe konke kuyadingeka ukuze umuntu wanamuhla - TV, ucingo, i-Internet. Ngaphezu kwalokho, ihhotela izivakashi nethuba kokubili izobanjelwa ehholo inkomfa izingxoxo zebhizinisi lendawo nezindawo uphumule kwelinye zokudlela eziningi. Ngokwesibonelo, e-restaurant "Beshtau" emelela angaphandle izivakashi amakhono bendabuko cuisine Russian, kanye izitsha of Europe kanye yaseCaucasia, noma "Varadero" ikhofi ibha design okwenziwa isitayela-Cuban, okuvumela hhayi kuphela ukubona nemidanso, kodwa futhi ukubhema i ugwayi wangempela-Cuban. izivakashi eziningi on uhambo Russia, ukujabulela ukuvakashela ibha wokubawa abantu bayisekele, njalo Unikela izivakashi yayo nge izitsha ashisayo nabandayo futhi ezihlukahlukene iziphuzo (ezidakayo nezinto zokuhlanza esithambile).
"Flosteron": yokusetshenziswa (imijovo), ukubuyekezwa, Izimo